राष्ट्र बैंकले भोलि बोलकबोलमार्फत रु. १० अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्नेे, क–कसले किन्न पाउने ? Bizshala -
राष्ट्र बैंकले भोलि बोलकबोलमार्फत रु. १० अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्नेे, क–कसले किन्न पाउने ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि मंगलबार (असोज २० ) गते १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र बोलकबोलमार्फत बिक्री खुलाउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सातवर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८४ ‘घ’ बोलकबोलमार्फत बिक्री खुलाउने भएको हो। यो ऋणपत्रमा भोलि मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म राष्ट्र बैंकको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमार्फत इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्।
यो ऋणपत्रको निष्कासन २०७७ असोज २१ गते हुनेछ। साँवा भुक्तानी २०८४ असोज २१ गते हुनेछ। ब्याज भुक्तानी भने अर्धवार्षिक रुपमा हुने र आर्जिक ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ। ब्याजदर भने बोलकबोलका माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ।
थप जानकारी यो सूचनामा –
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) मा दबाब पर्न...